हल्याण्ड मा पेय पदार्थ | Absolut यात्रा
मारुउजेन | | नीदरल्याण्ड
हामी सबै सहमत छौं कि यदि हल्याण्डको बारेमा सोच्दछौं भने हामी हेनेकेन बियरको बारेमा सोच्छौं। स्पष्टतया यो केवल चीज मात्र होइन जुन मातेको हो वा यहाँ वरिपरिको पेय पदार्थ हो। मेरो मतलब, त्यहाँ हेनेकेन भन्दा धेरै र सामान्य बियर भन्दा धेरै छ। तर तब, हल्याण्ड मा पेय कस्तो छ?
आज हामी त्यसबारे कुरा गर्नेछौं, जुन हल्याण्डको सबैभन्दा लोकप्रिय र सामान्य पेय हो जुन हामी त्यहाँ जान्छौं के प्रयास गर्न सक्दछौं को एक सूची छ, महामारी को अन्त को माध्यम बाट।
1 हल्याण्ड र यसको परम्परागत पेय
2 हल्याण्ड मा बियर
6 तपाईं चिन्तित भेट्नुहुनेछ
7 कफी वर्किर्ड
हल्याण्ड र यसको परम्परागत पेय
सिद्धान्तमा, तपाइँले यो जान्नुपर्दछ धेरै परम्परागत डच पेयहरूमा मदिरा हुन्छ र त्यो कहिलेकाँही सबैमा रमाइलो स्वाद हुँदैन वा भनिएको हो, रमाईलो छैन। कानूनी पेय युगको सन्दर्भमा यहाँ तपाईं १ beer बाट बियर र वाइन पिउन सक्नुहुन्छ र १ stronger वर्ष को उमेर देखि कडा पेय।
परम्परागत पेय पदार्थहरूको रूपमा हामी बियर गणना गर्छौं, कोफिक भेरिकेड, ताजा पुदिना चिया वा कविता, जेन्भर लिकुर र अन्य प्रसिद्ध डच लिकुअर्स, चोकमेल, एडवोक्याट युक्त ब्रान्डी, कोपस्टुट, कोर्नविजन ...
हल्याण्ड मा बियर
यहाँ दुई सबैभन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड हो हेनेकेन र एम्स्टेल यद्यपि स्थानीयहरूले उनीहरूको लागि केवल "pil" वा "biertje" भन्दै सोध्छन्। यो बियरको बारेमा छ फिक्का लगहरू र तिनीहरू धेरै लोकप्रिय छन्, तर यो कुरा पनि साँचो हो कि डचहरूले रमाए परम्परागत बियर जस्तै bokbier वा witbier।
पहिलो वसन्त र गिरावटमा बनेको विशेष बियर हो जुन माल्ट स्वाद र मिठो हुन्छ। स्वाद वर्षको दुबै मौसममा फरक हुन्छ, र शरद moreतुमा अधिक तीव्र र टाढा हुन्छ। त्यसोभए, यदि तपाईं एम्स्टर्डम जानुहुन्छ भने पातहरू खस्दा तपाईं बबकीयर महोत्सवमा भाग लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को बियर, विस्बीयर बियरमा पनि मसलाहरू छन् र मिठो छ, तर यो धेरै ताजा छ। नेदरल्याण्ड्समा सामान्यत: यसलाई काँचको फेदमा कुचोल्न र यसको ताजापन र अम्लता बाहिर निकाल्ने निम्तीको पात र भाँडा प्रयोग गरिन्छ।
साथै कहिलेकाँही बियरलाई झारको मिक्सको साथ प्रयोग गरिन्छs, 'gruit', सदियौं पहिले प्रयोग भयो र बियर संरक्षण गर्न मद्दत गर्‍यो जब हप्सहरू अस्तित्वमा थिएन भन्ने कुरा थाहा थियो। तपाई यो विविधतालाई जोपेनमा हार्लेममा अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि।
सत्य यो हो कि आज त्यहाँ धेरै ब्रुअरीहरू छन् जसले बियरहरूको एक विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछ। तपाईं बारहरूमा जान सक्नुहुन्छ वा तपाईं विशिष्ट ब्रुअरीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
ठीक छ, यस पेयको बच्चाहरूको नाम छ तर सबैजनाले यसलाई समान रूपमा खान्छन्। चिसो दिनमा चोकमेल माग्न सामान्य छ, यसको सबैभन्दा लोकप्रिय व्यावसायिक नाम तातो चकलेट र सान्त्वनादायी।
त्यहाँ केही क्याफे र बारहरूमा चोकमेलको लागि भेन्डि machines मेशिनहरू पनि छन्, यो सुपरमार्केटमा र फूड स्टोरहरूमा बेचिन्छ र त्यहाँ क्रीम वा स्किम्ड दुधको साथ डार्क चकलेट समावेश गर्ने प्रजातिहरू छन्।
ब्रान्डको आदर्श वाक्य "de enige échte" हो, केहि यस्तो पहिलो र एक मात्र। हो, त्यहाँ विकल्पहरू छन्, टोनी चोकोलोनेली दूध जुन तपाईं नेदरल्याण्डमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ, र विशेष गरी जैविक उत्पादनहरू बेच्ने स्टोरहरूमा।
हल्याण्डका धेरै आत्माहरू छन् र एम्स्टर्डममा सबैभन्दा लोकप्रिय एक हो Wynand Fockink मदिरा। अर्को प्रसिद्ध रक्सी हो टी निउवे डाइप। सत्य यो हो कि लिकुरहरू १land औं शताब्दीदेखि हल्याण्डमा लोकप्रिय हुँदै आएका छन्, यी देशहरूको सुनौलो युग, यस्तो अवस्थामा जब धनीहरू मात्र सम्पन्न गर्न सक्दछ आयातित चिनी, मसला र फलफूलले बनाइएका लिकरहरू।
त्यस समयमा गरीबहरू, साधारण मानिसहरूले केवल बियर वा जेन्सर मात्र पिउँथे, तर उनीहरूले रक्सी पिएनन्। त्यस पछि, रक्सी सानो ट्यूलिप आकारको चश्मामा सेवा गरियो तिनीहरू काठमा भरिन्छन्, त्यसैले कुनै झुकाव छैन र धेरै सावधान रहनुहोस्। भनिन्छ कि यो यस्तो सेवा दिइन्छ, झन्डै ओभरफ्लो भयो, किनकि डच व्यापारीहरूले भने कि उनीहरूले आफ्नो पैसाले गिलास भर्छन्, कृपया, सबै कुराको शीर्षमा।
परम्परागत डच लिकर मसला वा फल, वा दुबै, आसुत पेय जोडी भोदका वा जेन्भर जोडी द्वारा बनाईन्छ। चिनी थपिएको छ, कम्तिमा मिश्रण कम्तिमा एक महिनाको लागि म्यारिनेट गर्न अनुमति दिइन्छ र नतीजा कडा र स्पष्ट स्वादको साथ एक मीठा तरल हो। गम्भिर मादक सामग्री।
उत्तर समुद्री टिब्बामा पाइने सुन्तलाको स्वादका साथ 'डुइन्डूर' मा सबैभन्दा लोकप्रिय लिकुर स्वादहरू मध्ये एक। पनि चेरी वा निम्बूको साथ लिकरहरू छन्, इटालियन क्लासिक जस्तै नींबुसेलो को रूप मा परिचित।
माथी, तरल पदार्थको बारेमा कुरा गर्ने अवसरमा, हामी जेनिभरको बारेमा कुरा गर्थ्यौं, अ English्ग्रेजी जिनको डच संस्करण। इतिहासले भन्छ कि जेनिभर १1630० मा स्पेन र इ England्ल्यान्ड बिरूद्धको युद्धको क्रममा डच सैनिकहरूले सेवन गरेका थिए। उनीहरूले यो युद्ध अघि पिए होलान् र आफ्ना अंग्रेजी मित्रहरूसँग बाँडेका थिए।
जब अ soldiers्ग्रेजी सिपाहीहरू आफ्नो देश फर्किए उनीहरूले आफूसँगै "डच साहसी" भन्ने विधि ल्याए, किनकि यो बप्तिस्मा लिइएको थियो। तिनीहरू त्यति सफल भएनन्, स्वाद पहिले यस्तै रहेन, त्यसैले उनीहरूले केही जडिबुटी र मसलाहरू थपेर यसलाई "पिउन योग्य" बनाइदिए र अ English्ग्रेजी जडिबुटी जिन र डच जेनिभरको बीचबाट आएको भिन्नता यही हो।
जेनिभर यो अन्न निकाल्ने र यसलाई जुनिपर बेरीको स्वाद प्रयोग गरेर बनिएको हो।, र कहिलेकाँही केहि प्रजातिहरू जो लिकर बनाउन प्रयोग गरिन्छ। जसै रोटरडमको बन्दरगाह वरपरका सबै छिमेकमा अन्न आयात गर्न प्रयोग गरिएको थियो, उदाहरणका लागि, स्किडाम क्षेत्र जेनिभर डिस्टिलरीले भरिएको थियो र आज पनि देख्न सकिन्छ।
त्यहाँ छन् जेन्भरको विभिन्न शैलियां: आउड र जonge्ग। फरक तिनीहरू मिसिन गर्न बाँकी समयमा तर तिनीहरूको विधिमा पर्दैन। जेन्भर ओउड एक पुरानो नुस्खाको साथ बनेको छ, जबकि जonge्ग एक नयाँ शैली छ। यदि तपाईं यस कथाको बारेमा बढि जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ एम्स्टर्डममा बोल्स घर, वा जेनेभर संग्रहालय, स्किडाममा।
तपाईं चिन्तित भेट्नुहुनेछ
हामी केही बेर मादक पेयबाट बाहिर निस्कन्छौं र चियामा जान्छौं। यो एक हो ताजा पुदिना चिया जुन हल्याण्डमा धेरै परम्परागत छ र एम्स्टर्डमको कुनै पनि कुनामा धेरै पियक्कड छ। चियालाई गिलासको कप वा अग्लो मगमा, तातो पानी र एक मुठी ताजा चिया पातहरू सहित दिइन्छ।
तपाईं मह र निम्बूको स्लाइसहरू थप्न सक्नुहुन्छ र यो एक हल्का विकल्प हो यदि तपाईं कफि जस्तो महसुस गर्नुहुन्न वा यदि तपाईं थप पाचन चाहनुहुन्छ भने।
चियाबाट कफी सम्म त्यहाँ केवल एक चरण हुन्छ। यदि तपाइँ संयोजन को रुचि दूध संग कफी त्यसो भए यो डच कफी तपाईंको लागि हो। यो क्लासिक क्याफे लेट्टे वा क्याफे औ लाइट वा दूधको साथ कफिको डच संस्करण हो। तातो दुधको कफी जुन प्राय जसो एस्प्रेसोको साथ बनाईन्छ आधारमा यसमा फोम बनाउनको लागि बाफ गरिएको दुध थपिन्छ। रमाइलो।
नाम, koffie verkeerd, मतलब गलत कफीकिनकि साधारण कफीमा दुब्लो मात्र दुध छ। सामान्य कुरा बिहान वा दिउँसो यो संस्करणको अर्डर गर्नु हो, र त्यहाँ जो तीतो पीडित हुन्छन्, अरुले चिनी घन थप्दछन्। क्याफे वा बारहरूमा यो कुकीसँगै प्रस्तुत गरिन्छ कुकी एक साथीको रूपमा।
हामी मादक पेयमा फर्कन्छौं। यो पेय बाट बनेको छ अण्डा, चिनी र ब्राण्डी। परिणाम एक सुनौलो पेय हो कि रूपमा सेवा गर्दछ धेरै ककटेलहरू र डेसर्टहरू बनाउनको लागि आधार।
अधिवक्ताको साथ बनेको एउटा प्रख्यात ककटेल स्नोबल हो: यहाँ आधा र आधा नींबू पानीको साथ मिसिएको छ। हो, इ England्ल्यान्डमा पनि यो नै दिइन्छ, तर यहाँ हल्याण्डमा यो प्राय: व्हीप्ड क्रीम र कोको पाउडरको फ्लेकको साथ प्रस्तुत गरिन्छ।
शब्द, अधिवक्ता, को अर्थ वकील हो र यो कुनै संयोग होइन। पेय पछाडिको कथाले भन्छ कि अधिवक्ता वा एडभ्याकेटबेरल उनीहरूको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो जसले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु पर्छ उनीहरूको घाँटी लुब्रिकेट गर्नु भन्दा पहिले। कसले सार्वजनिक रूपमा बोल्छ? वकिलहरु।
यो पेय सबै विशिष्ट डच मदिरा स्टोर वा बारहरूमा उपलब्ध छ, रेस्टुरेन्ट वा क्याफेहरूमा पनि। जेनिभरको साथ भ्रमित हुनु हुँदैन। यो पेय अनाजबाट बनेको छ, तर जेनिभरले जस्तो कि जुनिपर बेरी प्रयोग गर्दछ, त्यस्ता बेरीहरू यहाँ छैनन्। त्यसोभए, स्वाद धेरै फरक छ।
सामान्यतया, कोर्नविजन परम्परागत डच खाना संग सेवा, उदाहरण को लागी, उहाँलाई हेरिंग (फिश डिश)
यसलाई अंग्रेजी बोइलमेकरसँग तुलना गर्न सकिन्छ। दुई चश्मा सेवा गरिएको छ, एउटा बियर र एक जेन्भरको। पहिले जेनिभर रक्सीले मातिन्छन्, एउटा बगैंचामा, र त्यसपछि बियरलाई पहिले जलाएर शान्त पार्न।
रमाईलो र गहन र धेरै डच, यदि तपाइँ एक अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ १००% राष्ट्रिय अनुभव।
यो एक सुन्तला पेय बाहेक केहि अरू छैन राष्ट्रिय उत्सवहरूमा देखा पर्दछजस्तै किंग डे वा फुटबल खेलहरू वा लिबरेशन डे। यो एउटा धेरै कडा मदिरा, %०% रक्सीको साथ, र सामान्यतयाaमा दिइन्छ शट.
Oranjebitter यो तीतो र बलियो छ, यो ब्रान्डी, सुन्तला र सुन्तलाको बोक्राको साथ बनेको छ। यो क्लासिक सुन्तला लिकुर जस्तै छ तर लिकूरमा यसमा चिनी हुन्छ। यो भन्नु पर्दछ कि आज धेरै जसो Oranjbitter बोतलहरु संग चिनी छ, त्यसैले यो अब छैन soooo तीतो
यद्यपि यसको फ्रान्सेली नाम छ, ड्रिन्च हो। यो रक्सी हो, क्लासिक को डच संस्करण सिग्नक. यसलाई यसको फ्रान्सेली भाई पनि भनिन्थ्यो, तर १ 60 s० को दशकमा फ्रान्सेली संस्करणले उत्पत्तिको पदनाम प्राप्त गर्‍यो र त्यसपछि नाम परिवर्तन गर्नुपर्‍यो।
एक लोकप्रिय पेय यसलाई कोका कोलासँग मिसिन गर्नु हो, यद्यपि हामीले त्यसलाई बिर्सनु हुँदैन यसमा धेरै रक्सी हुन्छ, करीव% 35%। धेरै कडा रक्सी गोल्डस्ट्रिक छ, 50०% को रक्सी सामग्रीको साथ।
अहिले सम्म, केहि हल्याण्ड मा पेय पदार्थ तर पक्कै पनि त्यहाँ छ। नेदरल्याण्ड्सको तपाईंको अर्को यात्रामा, कलेजो रक्षक लगाउनुहोस् र…। रमाइलो गर्न!
Gastronomyआरामरेस्टुरेन्ट र बारहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » हल्याण्ड मा पेय
628 893२8270dXNUMX१bb XNUMX२d